Man United oo ka ciribtirtay kooxda Liverpool tartanka FA Cup-ka kaddib markii ay guul kaga gaartay Old Trafford… +SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 24 Jan 2021. Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford ku garaacday kooxda Liverpool, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada wareega afaraad ee tartanka FA Cup-ka.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 1-1 ah ay isku mari waayeen labada kooxood Manchester United iyo Liverpool.
Daqiiqadii 18-aad Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Mohamed Salah, kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Roberto Firmino.
26 daqiiqo marka ay dheeshu mareysay Manchester United ayaa dhalisay goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay Mason Greenwood oo caawin ka helay xiddiga ay weerarka ka wada ciyaaraan ee Marcus Rashford.
Daqiiqadii 48-aad Marcus Rashford ayaa hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Manchester United, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2-1, iyadoo caawinta goolkan uu ka helay Mason Greenwood.
Laakiin 58 daqiiqo marka ay ciyaartu aheyd Mohamed Salah ayaa markale shabaqa ka soo taabtay kooxda Manchester United, wuxuuna dheesha ka dhigay barbardhac 2-2 ah, waxaana caawinta goolkan loo diiwaan galiyay Roberto Firmino.
78 daqiiqo kooxda Manchester United ayaa markale la wareegtay hoggaanka dheesha kaddib markii uu laad qurux badan uu dhaliyay xiddiga reer Portugal ee Bruno Fernandes, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 3-2.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-2 oo ay Manchester United, kaga adkaatay kooxda Liverpool oo marti ugu aheyd garoonka Old Trafford, Red Devils ayaana sidaas ugu gudubtay wareega xiga ee tartanka FA Cup-ka.
Kooxda Liverpool oo saxiixa David Alaba ku garaacaysa Real Madrid & Tababare Jurgen Klopp oo arrintan si deg deg ah gacanta ula soo galay